FERROALLOY Factory, mpamatsy - Mpanamboatra FERROALLOY Sina
Ny alika manganese silika (SiMn) dia misy silikonika, manganese, vy, karbonana kely ary singa hafa. Ny vokatry ny fampidirana silicomanganese amin'ny vy: samy manana ny fitaoman'izy ireo amin'ny fananan'ny vy ny silika sy ny manganese.
Ferrosilicon dia karazana ferroalloy izay voaforona vokarin'ny fihenan'ny silica na fasika misy coke eo imason'ny vy. Ny loharanom-by vy mahazatra dia vy vy na kilaometatra. Ny Ferrosilicons misy atiny silika hatramin'ny 15% dia vita amin'ny lafaoro nipoaka nopetahany biriky afo asidra.
Ferromanganese dia karazana ferroalloy izay vita amin'ny vy sy manganese.dia vita amin'ny alàlan'ny fanamainana ny fangaro amin'ny oxides MnO2 sy Fe2O3, miaraka amin'ny carbon, matetika toy ny arina sy ny coke, na ao anaty lafaoro nipoaka na ny rafitra misy fatana lava-bato. antsoina hoe lafaoro arina anaty rano.
Ferromolybdenum dia ferroalloy iray molybdenum sy vy, izay misy molybdenum matetika 50 ~ 60%, ampiasaina ho toy ny metaly additive amin'ny fanaovana vy. Ny tena ampiasana azy dia ny fanaovana vy toy ny molybdenum element additive. Ny fampidirana molybdenum ao anaty vy dia afaka mampisy firaisan'ny vy ny vy kristaly tsara